Google Earth 7 wuxuu xaddidayaa qabashada sawirrada saxda ah ee saxda ah - Geofumadas
Google Earth 7 waxay xaddideysaa qabashada sawirrada qumman ee saxda ah
Febraayo, 2013 AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps
Marka nooca cusub ee Plex.Earth 3 uu soo dhowaanayo, waxaan garowsan nahay in kasta oo ay taageerto rarida adeegyada khariidadaha adeegyada webka, faa iidada weyn ee ay ilaa iyo hadda u leedahay inay soo dejiso muuqaalka Google Earth ee la hagaajiyay ... ma noqon doonto si fudud
Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in Google, oo raadineysa inay ka hortagto dadka isticmaala marinka 'ActiveX' si ay u soo saaraan sawirro asal ah, waxay ku xirtay qaabkeeda bilaashka ah ikhtiyaarka ah in la dhaqaajiyo dhulka, kaas oo sawirku ku qalloocan yahay inuu la qabsado qaabka dijitaalka ah . Tani waxay sidoo kale saameyn ku yeelan doontaa kuwii iibsaday nooc ka mid ah Stitchmaps si isku mid ah iyo kuwii gacanta ku sameeyay iyagoo adeegsanaya shaashad-daabac kuna soo biiray Photoshop.
Waxaan xasuustaa inaan horey mowduucan ula keenay Tomás, oo ah abuuraha Cartesia, kafeega sanadkii hore. Runtii waxay u muuqatay mid adag in Google ay heshiis la saxiixan karto PlexScape si ay u siiso awoodaha ay AutoDesk beenisay tan iyo nooca AutoCAD 2013. Iyo, markaan iibsano sawir dayax gacmeed leh Geoeye, mid ka mid ah mamnuucyada ayaa ah in la geeyo internetka; waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid waa inaad gelisaa qaybo yar yar xalka sare ama bandhig dhan oo cabirkiisu yaraaday. Marka waxay ahayd wax lagu qoslo inay aqbashay waxa Plex.Earth sameeyo ilaa noocyada 6 ee Google Earth.
Tan, adeegsadayaashu waxay ku sii wadi karaan inay ku sii wadaan Google Earth 6 ama iibsashada nooca la bixiyay ee ku socda 400 dollars, sida José noogu sheegay Blog-ga GIS & AutoDesk.
In cabbaar ah, waxaan bilaabay in aan sameeyo tijaabooyin ku saabsan aagagga dhul dhismeedka fidsan, waxaana awooday in aan xaqiijiyo in dhalanroggu ka yar yahay; taasi waxay dhaxeysaa 3 ilaa 7 mitir. Laakiin markaan tijaabinayo aag aan sinnayn, waxaan u arkaa natiijooyinka inaysan ahayn wax masiibo ka yar.
Aan aragno tusaalahan soo socda, in ujeedooyinka qodobkan aan doorto dhibic oo ah xadka u sarreeya sawirka xallinta sare ee la muujiyo, oo kaliya buurta oo ka badan mitirka 200 ee dhererka:
Maaddaama xadka uu yahay xarun, dhalin-la'aanta ay sababtay gargaarku ma ahan mid la dareemi karo, inkasta oo ay cadahay in marka ugu dambeysa ay jiraan sida sawiradan soo socda markaan u dhaqaaqno dhanka bidix iyo midigta.
Hadda aan qiyaasno isku dayga shaashadaha iyo isku dayga inaad isku mid ka dhigto wax sidan oo kale ah. Xaqiiqdii tan, Google waxay qaadaysaa tallaabo muhiim ah labadaba qaybteeda lacag bixinta si ay u iibiso wax badan, iyo inay ka hortagto xadgudubyada soo dejinta ballaaran.
Dhanka kale, si loo xalliyo khilaafka, Plex.Earth wuxuu ku daray qaybta 3 Qaar ka mid ah noocyada kala duwan sida:
Awoodda lagu taageeri karo WMS, oo aan ku dhajin karno sawirada iyo layman juquraafi ah oo ka shaqeeya heerarka OGC ee ka yimid IDEs ee waddan kasta.
Suurtagalnimada in laga soo dejiyo sawirada BingMaps, taas oo inkasta oo aysan lahayn isla caymis, ay gaarto in ka badan maalin kasta. Waxay kaloo taageertaa Khariidadaha OpenStreet.
Isbeddelada nooca cusub:
Qaabka liisanka Standard-Pro-Premium ee nooc kasta uu ku lahaa awoodo kala duwan oo tartiib tartiib ah ayaa meesha looga saarayaa. Hadda nooc kasta wuxuu leeyahay wax walba.
Moodooyinka cusub waa Wareegtada Ganacsiga iyo Wershadaha Ganacsiga, oo leh awoodaha oo idil oo kala gaddisan tirada mishiinnada.
Marka laga hadlayo nooca ganacsiga, waxaa jira qiimo hal shati, iyo mid kale oo lagu iibsanayo 2 ilaa 10 shati. Faa'iidada in liisanka loo isticmaali karo laba mashiin, tusaale ahaan, xafiiska iyo guriga, ama PC desktop-ka iyo laptop-ka. Sure, looma isticmaali karo isku mar.
Marka laga hadlayo liisanka Shirkada, waxaa jira qiimo 10 ruqsadood, oo waliba loo isticmaali karo min laba mashiin; ama 20 guud ahaan. Soojiidashada tan waxaa loogu talagalay shirkadaha, maadaama ay dul sabeynayaan, si looga isticmaali karo mashiin kasta oo ku xiran shabakad, iyadoo la adeegsanayo jeeg si loo qabsado shati la heli karo loona hubiyo siidaynta.
Ugu danbeyn, qiimaha waa ka raqiisan yahay haddii aan tixgelino mishiinka labanlaab.
Waxaan ognahay in dhexe ee February this laga heli doonaa iyo version this of Plex.Earth, taas oo u muuqata racfaanka riwaayado la qaadan Explorer Map hadda ka mid ah mahrajaan cusub.
Post Previous" Hore Koorasyada 2 Cadastre ayaa kor u qaadey OAS
Post Next Maxaa ka dambeeya iscasilaadda Pope BenedictNext »
3 Jawaabo "Google Earth 7 wuxuu xadidayaa qabashada sawirada saxda ah ee saxda ah"
kıvanç isagu wuxuu leeyahay:
Xaaladdu waxay saameyneysaa markaad rabto inaad soo dejiso daboolka si aad ugu biirto masaajidka.
Si caadi ah u socdo, ma jirto wax dhibaato ah, ma jiraan wax dhalanrog ah, marka laga reebo in dhulalka aan la demin karin.
Waad salaaman tihiin, sidee saaxiib u tihiin reer Geofumadas? Fiiri haddii aan fahmay, markaa qoraalkani ma wuxuu ka dhigan yahay in Google Earth cusub ee 7 sawirradu ay ka sii qallooci doonaan? markaa waxay lumiyeen tayo markay soo dejistaan ​​ama laga daalacdo isla GE? Weli waxaan haystaa nooca 6.3 ... haddii aad sax tahay waa iska cadahay inay sidaas u sameeyaan si GE-ga loogu sii iibiyo ruqsad badan, waran badan ayey ku qaataan .. Waxaan sugayaa jawaabtaada saaxiib g!